Nagu saabsan | Xuzhou Sunbright Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd.
Xuzhou Sunbright Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd.
Xuzhou Sunbright waxay leedahay dhowr doz oo alaabooyin taxane ah kuwaas oo isku daraya farsamada indhaha, makaanikada, korontada iyo kombiyuutarka, oo ay kujiraan dopplers midab, B ultrasounds, kormeerayaal kaladuwan oo kaladuwan, iskudubbarrada, elektarograamyada iyo wixii la mid ah. Iyada oo leh badeecooyin iyo adeegyo tayo sare leh, Shanghai Sunbright waxay kalsooni sare ka heshay macaamiisha badankood iyo feejignaanta iyo taageerooyinka hogaamiyaasha heerarka oo dhan. Waqtigan xaadirka ah Sunbright wuxuu noqday magaca caanka ah ee hogaaminaya safka, wuxuu sameeyay in kabadan 50 xafiisyo laamo ah kadib xafiisyada adeega in kabadan 20 gobol, degmooyin iyo ismaamulada dalka Shiinaha, alaabada loo dhoofiyo in kabadan 50 wadan oo kuyaala Yurub, Aasiya, Afrika, Koonfurta Ameerika iyo Waqooyiga Ameerika oo noqda barxadda gaarka ah ee Sunbright ee iibka iyo adeegga. "Tayo aad u fiican, Adeeg aad u fiican" had iyo jeer waa siyaasadda tayada shirkadeena.
Ultrasound, Color Doppler iyo baaritaano isku mid ah oo loogu talagalay astaanta caanka ah had iyo jeer waa sheyga ugu caansan ee Sunbright. Sannadka 2019, Sunbright wuxuu ku guuleystay boqolaal qandaraas oo ka dhacay Ameerika, Afrika, Aasiya iyo Yurub. Wax soosaarka sanadlaha ah waa illaa 50000 unug, iyadoo la raacayo soosaarka caadiga ah ee CE ISO. Iyadoo loo marayo habka wax soo saarka adag, kormeerka saxda ah, kooxda adeegga tayada sare leh, Sunbright waxay u heellan tahay inay si joogto ah u bixiso alaab tayo sare leh iyo adeegyo ka sarreeya macaamiisha adduunka.
Shirkadda Sunbright waxay leedahay 6 khadadka wax soo saar ee kormeeraha bukaanka, ECG, Faleebada Faleebada, Mashiinka Siingada, Fetal Doppler, Pulse Oximeter iyo Thermometer. Waxay leedahay geedi socod wax soo saar oo faahfaahsan iyo tayada adag. Qeyb kasta, guddi ama qayb kasta, Sunbright waxay si buuxda gacanta ugu haysaa kaydinta ilaa isticmaalka, taas oo hubinaysa xasiloonida mashiinka. Waxaa intaa dheer, mashiinka ugu dambeeya wuxuu ku gaboobayaa heerkulka sare iyo heerkulka caadiga ah si gooni gooni ah tobannaan saacadood, taas oo ah dammaanadda ugu fiican ee tayada sare leh.
"Tayada sare, qiimaha macquulka ah & adeega iibka kadib" waa mabda'keena, "Qanacsanaanta Macaamiisha" waa hadafkeena weligeed ah; waxyaabaha our ayaa si fiican u aqbalay ma aha oo kaliya in suuqa gudaha laakiin sidoo kale in badan oo suuqyada oversea adduunka oo dhan.
1). Qiimaha tooska ah ee Warshadda, oo tartan badan, waxay bixin kartaa wasakhdo kala duwan, waxayna siisaa qalab u dhigma.
2). Warshadeenna u gaarka ah, waxay si adag u xakameysaa tallaabo kasta oo wax soo saar ah, tayada xakamaynta wanaagsan iyo waqtiga bixinta.
3). Tiknoolajiyadda qaangaarka ah, tayo sare leh, iyo cilladaha ka yar ee habka wax soo saarka.
XuZhou Sunbright wuxuu dammaanad qaadayaa qalab cusub oo aan ka ahayn qalabyada si uu uga madax bannaanaado cilladaha shaqada iyo qalabka muddo siddeed iyo toban bilood ah (lix bilood oo loogu talagalay dayactirka) laga bilaabo taariikhda rarka ee isticmaalka caadiga ah iyo adeegga. Waajibaadka shirkadeena ee damaanadkan ayaa ku xaddidan dayactirka, ikhtiyaarrada shirkadeena, qayb kasta oo ka mid ah marka baaritaanka shirkadeena uu caddeeyo cillad.
Habka Sheegashada Adeegga
La xiriir Waaxda Adeegga Foomka Sheegashada Adeegga oo ay la socdaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhibaatada. Fadlan bixi nambarka nambarka, nambarka taxanaha ah, iyo sharaxaad kooban ee sababta soo noqoshada, sawir cad oo muujinaya dhibaatada ayaa daliil fiican u ah.
Muddo damaanad ah gudahood: Shirkadaha qeybiya / macaamilka ayaa mas'uul ka ah xamuulka xamuulka ee loo dirayo Xuzhou Sunbright dayactirka. Xuzhou Sunbright ayaa mas'uul ka ah xamuulka laga bilaabo Xuzhou Sunbright ilaa qeybiyaha / macaamiisha. Muddada damaanadda kadib: Macaamilku wuxuu qaadayaa xamuul kasta oo loogu talagalay qalabka la soo celiyey.
XuZhou Sunbright waxay siisaa tababar farsamo & adeeg bilaash ah shaqaalaha farsamada & iibinta ee qeybiyeyaasha alaabooyinka la xiriira waxayna sii siin doonaan gargaar farsamo iyadoo loo marayo e-mailka, Skype sida ay codsadeen qeybiyeyaasha. Tababarka waxaa lagu qaban doonaa Shanghai Shiinaha. Kharashka gaadiidka iyo hoyga ayaa ku jira koontada qaybiyaasha.
Carwo & Shahaado
Sunbright waxay leedahay cilmi baaris madaxbannaan iyo karti horumarineed, nidaam xakameyn tayo leh oo qumman, shaqaale tayo sare leh. Waqtigan xaadirka ah Sunbright waxay leedahay in kabadan 100 farsamo yaqaanno xirfadlayaal ah, daraasiin cilmibaareyaal sayniska iyo teknolojiyada ah, in kabadan 300 oo shaqaale ah. Waxaa laga filayaa inay si adag u raacaan codsiyada tayada leh ee tallaabo kasta oo wax soo saar iyo hawlgal ah. Adeegga aasaasiga ah ka sokow, Sunbright wuxuu kaloo bixin karaa adeegyo ku habboon bini-aadamnimada oo loo habeeyay iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Macaamiil marka hore, adeegga marka hore waa mabda'a adeegga!